Qoorqoor ayaa xaqiijiyey in shirka Dhuusamareeb 3 uu xalay si rasmi ah u furmay iyadoo ay… – Hagaag.com
28 Nofeembar 2020 in National // Axmed Madoobe ayaa ku eedeeyey dowladda Somalia in ay ka baxday heshiisyadii doorasho…
28 Nofeembar 2020 in World // Ciidamada Itoobiya ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen magaalada Mekelle ee xarunta…
28 Nofeembar 2020 in English // Iran’s supreme leader vows revenge over slain scientist…
28 Nofeembar 2020 in English // Tigray leader says Ethiopian offensive on regional capital of Mekelle has begun…
28 Nofeembar 2020 in National // Midowga Yurub ayaa ka xumaaday dil toogasho ah oo lagu fuliyey 6 qof Somaliland…
Qoorqoor ayaa xaqiijiyey in shirka Dhuusamareeb 3 uu xalay si rasmi ah u furmay iyadoo ay…
Posted on 18 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada Magaalada Dhuusamareeb ayaa kaga dhawaaqay in xalay uu si rasmi ah u furmay wejiga hore ee Shirka Dhuusamareeb 3, xilli ay ka maqan yihiin Madaxda Puntland iyo Jubbaland.
Madaxweyne-yaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Siciid Cabdullaahi Deni ayaa walaac ka muujiyay habdhaqanka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagoona shuruud kaga dhigay ka qaybgalka shirkaasi in la helo cid damaanad qaadda inay dhaqangalayan waxyaabihii lagu heshiiyay. Labada maamul ayaa ku baaqay in Beesha Caalamka laga soo qaybgeliyo shirka, si damaanad uga noqoto inay meel-mari doonaan qodobadii lagu heshiiyay.
Madaxweynaha Galmudug ayaa labada Madaxweyne ugu baaqay bal inay marka hore ka soo qaybgalaan shirka, isagoona ballanqaaday in la xalin doono wixii tabasho ah, ee ay qabaan.
Madaxweynaha ayaa intii uu hadlayay waxaa uu sheegay in xubnihii ka kala socday Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, ee loo igmaday inay ka soo tala bixiyan nooca doorasho ee dalka laga qaban karo laga dhageystay hannaanka doorasho ee xilligan dalka laga qaban karo, isla-markaana weli la suggaayo talooyinkii looga fadhiyay maamulada shirka ka maqan, ayna muhiim u tahay inay shirka ka soo qaybgalaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa intaa ku daray in bulshada Soomaaliyeed ay iyadu isu tahay damaanad, isla-markaana ay meel marin doonaan wax kasta oo lagu wada gaaro Shirka Dhuusamareeb 3.
Beesha Caalamka ayaa Jimcihii Warsaxaafadeed ku sheegtay inaanay taageeri doonin nooc doorasho, oo ay garwadeen ka tahay hal dhinac amaba aan loo dhammeen. Beesha Caalamka waxay sheegtay inaanan dalka laga qaban karin nooc uun doorasho, oo ay heshiis ku yihiin kooxo gaar ah.
Beesha Caalamka oo gadaal uun ka riixeysay Shirarkii Dhuusamareeb ee 1 iyo 2 ayaa waxaa xilligan muuqata in Shirka Dhuusamareeb 3 aan looga maarmi doonin ka qaybgalkeeda, haddii aysan dhinacyadu isu tanaasulin.
About Admin (12220 Articles)
Halyeygii kubada cagta ee reer Argentine Diego Maradona ayaa geeriyooday…